के हो स्वाइन फ्लू ? स्वान फ्लू लाग्दैमा ज्यान जान्छ ? (भिडियो) « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
के हो स्वाइन फ्लू ? स्वान फ्लू लाग्दैमा ज्यान जान्छ ? (भिडियो)
काठमाडौं, २७ साउन । स्वाइन फ्लू, इन्फ्लूएञ्जा–ए अर्थात मौसमी रुघाखोकी सामान्य संक्रमण हो । तर, सामान्य संक्रमणबाट पनि धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो वर्ष मात्र देशका विभिन्न स्थानका १० जनाले ज्यान गुमाइसके । संक्रमीतको संख्या समेत बढेको छ । वर्षायाममा फोरमैला बढी हुने भएकाले पनि इन्फ्लूएञ्जा संक्रमतिको संख्या बढेको हुनसक्छ । मृतक र संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सरोकारवालाले स्वानइ फ्लू नियन्त्रण बाहिर गएको दावी गरेका छन् ।
स्वानइ फ्ल् अर्थात मौसमी रुघाखोकीलाई सामान्य संक्रमणकै रुपमा व्याख्या गरिएको छ । धेरैले यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको बताएका छन् । तर, सरकारले भने मौसमी रुघोखोकी निणन्त्रण बाहिर नगएको दावी गरेको छ । बिहिबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संक्रमितको संख्या बढी रहेतापनि नियन्त्रण बाहिर नरहेको दावी गरेका हुन ।
सरकारले इन्फ्लूएञ्जा–ए को संक्रमण नियन्त्रण बाहिर नरहेको दावी गरे पनि यो वर्ष मात्र यो संक्रमणबाट १० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तरगतको इपीडीमियोलोजी शाखाका अनुसा यो वर्ष पोखराका ३ र झापामा २ र स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही, काठमाडौं र ललितपुरका एक/एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ । अहिलेसम्म परिक्षण गराएका मध्ये देशभरका ५ सय जनामा इन्फ्लूएञ्जाको संक्रमण भेटिएको महाशाखाका स्वास्थ्य प्रवन्धक गुणनीधि शमाले जानकारी दिएका छन् ।
सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार वालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती र रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरुमा इन्फ्लूएञ्ज–ए को संक्रम बढी हुने गरेको छ । यस वर्ष इन्फ्लूएञ्ज–ए बाट ज्यान गुमाउनेहरु पनि वालबालिका र वृद्धवृद्धा तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरु रहेको मशाखाले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा समेत इन्फ्लूएञ्जा–ए बाट संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । यस अघि नै काठमाडौं र ललितपुरमा एक/एक जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । वर्षायाम सुरु भएपछि टेकुमा रहेको सुक्रराज ट्रपिकल तथा शरुवा रोग अस्पतालमा मात्रै दैनिक १५ जनाको हारहारीमा इन्फ्लूएञ्जा संक्रमित भेटिने गरेको अस्पतालका चिकित्सक शेरबहादुर पुन बताउँछन् ।
सरकारले इन्फ्लूएञ्जा–ए नियन्त्रण बाहिर नरहेको बताए पनि दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । वर्षायाम बाँकी नै रहेकाले अझै पनि संक्रमितको संख्या बढ्न सक्छ । स्याङजाको वालिङ लगायतका क्षेत्रमा यो संक्रमणले महामारीकै रुप लिइसकेको छ । अन्य क्षेत्रमा समेत यसले महामारीको रुप लिन सक्छ । महामारीकै रुप लियो भने धेरै मासिनको ज्यान जान सक्छ । त्यसैले सरकारले समयमै इन्फ्लुएञ्जा संक्रमण रोक्न विशेष गहल गर्नु पर्छ ।
वर्षायाममा बढी फोहोर मैला हुने भएकाले स्वभाविक रुपमा रुघाखोकी र झाडापाखालाको संक्रमण बढी हुने गरेको छ । इन्फ्लूएञ्जाको संक्रमण पनि वर्षायाममै बढी फैलने गरेको छ । सरकारले इन्फ्लूएञ्जा नियन्त्रणमै रहेको बताए पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । किनकी, दिनानु दिन इन्फ्लूएञ्जा संक्रमितको संख्या बढ्दो । तर, इन्फ्लूएञ्जाको संक्रमणबाट बच्नका लागि सर्वसाधारणले नै विषेश सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । किनकी, स्थास्थ्य संस्था भनेको विरामी भए पछि उपचार गर्ने निकाय मात्र हो ।
त्यसैले रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा पनि रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम हुनेछ । इन्फ्लूइञ्जा समान्य संक्रमण हो । तर, आम नागरिकलाई यो संक्रमणबाट कसरी बच्ने भन्ने थाहा छैन । त्यसैले, यो संक्रमणबाट मानिसले ज्यानै गुमाउने गरेको छन् ।